विवाहपछि के हुन्छ थाहा छैन - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
- अशिष्मा नकर्मी, अभिनेत्री
अचानक विवाह गर्ने योजना कसरी बन्यो ?
परिवारबाट विवाह गर्नुपर्छ भनिएको त धेरै भैसकेको थियो, मैले नै मानिरहेकी थिइनँ । अहिले आएर साइत जुर्‍यो भन्नुपर्‍यो ।
मागी विवाह नै रोज्नुभएछ नि ?
हो, मैले विगतदेखि नै मागी विवाह गर्छु भन्दै आएकी थिएँ । मलाई प्रेम विवाहभन्दा मागी विवाहमै विश्वास छ ।
हुनेवाला श्रीमान्का तर्फबाट विवाहको प्रस्ताव आएको हो ?
उहाँले नै मेरो भाइमार्फत विवाहको प्रस्ताव राख्नुभएको हो । त्यसो त यो विवाहको प्रस्ताव आएको पनि झन्डै ६ महिना भैसकेको थियो । मैले नै अलि पछि गर्ने भन्दै टार्दै आएकी थिएँ ।
अनि कसरी तयार हुनुभयो त ?
फोनमा एक–दुई पटक कुराकानी भयो । कुराकानी गर्दा राम्रो व्यवहार भएको व्यक्ति हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो । त्यसपछि केही दिनअघि मात्र मैले उहाँलाई भेटें । हाम्रो भेटपछि उहाँका आमा–बुवा र मेरा आमा–बुवाबीच पनि भेटघाट भयो । हामी दुवै जना विवाहका लागि तयार भएको बताएपछि हाम्रो परिवारले विवाहको साइत निकाल्यो । यही फागुन २८ गते सोमबार हामी नेवारी परम्पराअनुसार विवाह–बन्धनमा बाँधिदैछौं ।
उहाँ कुन पेसामा हुनुहुन्छ ?
पेसाले उहाँ चार्टड एकाउन्टेन्ट हो । मध्यबानेश्वरमा बसोबास गर्नुहुन्छ । उहाँको नामचाहिं नवीन प्रधान हो ।
तपाईंहरूबीच कति वर्षको फरक छ ?
ओहो... मैले त उहाँको उमेर नै सोधेकी छैन । उहाँले पनि मेरो उमेर सोध्नुभएन । अँ.... म मंसिरमा जन्मिएकी हुँ भने उहाँ असारमा । मंसिर र असारमा जन्मिएका केटा–केटीको विवाह राम्रो हुन्छ भन्ने सुनेकी छु ।
विवाहपछि चलचित्रमा सक्रिय हुने कि नहुने ?
उहाँले त विवाहपछि पनि अभिनय यात्रा जारी राखे हुन्छ भन्नुभएको छ । यद्यपि मैले भने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।